Iswekile Ukusela iti okanye ukusela ikofu asikokucima ukoma kube kanye. Ngumthendeleko wokunikezela kunye nokwabelana. Ukongeza iswekile kwikhofi okanye kwiti lakho kunokuba lula njengoko usakhumbula iinombolo zaseRoma! Nokuba ufuna isipuni esinye seswekile okanye ezimbini okanye ezintathu, kuya kufuneka ukhethe elinye kula manani mathathu elenziwe ngeswekile kwaye ulisondeze kwisiselo sakho eshushu / esibandayo. Isenzo esinye kwaye injongo yakho ixazululwe. Akukho sipuni, akukho ndlela yokulinganisa, siyifumana ilula.
Yeentaka Ngenxa yendlela yokuphila entle kunye nokungabikho kokunxibelelana okuzinzileyo kunye neNdalo, umntu uhlala kwimeko yongqubano kunye nokungoneliseki kwangaphakathi, okungamvumeliyo ukuba abunandiphe ubomi ngokupheleleyo. Ingagxilwa ngokwandisa imida yokuqonda kunye nokufumana amava amatsha okusebenzisana kukaNtu. Kutheni intaka? Ukucula kwabo kuchaphazela impilo yengqondo yabantu, kwaneentaka zikhusela indalo kwizitshabalalisi zezinambuzane. Iprojekthi uDomik Ptashki lithuba lokudala indawo eluncedo kunye nokuzama kwindima ye-ornithologist ngokujonga nokunyamekela iintaka.
Irobhothi Injongo yomyili yoyilo yayikukusombulula iingxaki ekukhuliseni inja-yekhaya lomntu om-1. Iingxaki zokuxhalaba kwezilwanyana zeCanine kunye neengxaki zomzimba zivela kwixesha elide lokungabikho kwabanakekeli. Ngenxa yeendawo zabo zokuhlala ezincinci, abakhathaleli babelana ngokuhlala kunye nezilwanyana eziziqabane, zibangela iingxaki zococeko. Ishukunyiswe kwiindawo zentlungu, umyili weza ne-robhothi yokhathalelo ethi 1. idlale kwaye inxibelelane nezilwanyana ezisebenza kunye nokuphosa impatho, phumla.
Isixhobo Esikhuliswa Ngokukhawuleza Ngemilebe Yendalo Iswekile Indlu Yangasese Yeentaka Irobhothi Imodyuli Yefeline Feline